संसारका कुनै अस्पतालमा लगेपनि कहिल्यै निको नहुने , वर्षमानलाई लागेको दुर्लभ रोग के हो ?
उपचारका लागि उनी गत असोज १३ मा थाइल्याण्ड प्रस्थान गरेका थिए। लगत्तै त्यहाँबाट उनी चीन पुगेका थिए। चिकित्सकका अनुसार उनी ‘क्रिग्लर-नजर-टाइप टु सिन्ड्रोम’ नामक दुर्लभ समस्याबाट पीडित छन्।
यो वंशाणुगत रोग भएको बताइएको छ।पुनको शरीरमा देखिएको जण्डिसको मात्रा अस्वभाविकरूपमा बढेको चिकित्सकहरूले बताएका थिए। यसै सन्दर्भमा पुनमा देखिएको ‘क्रिग्लर-नजर-टाइप टु सिन्ड्रोम’ के हो भनेर जनरल फिजिसियन डा. अमित गौलीसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं।
२०७८ पुष २६, सोमबार प्रकाशित 1 Minute 53 Views